Khudrad Afrikaan ah oo cusub ayaa laga heli karaa halkan Maine! - Amjambo Africa
Waxaa quoray Bonnie Rukin and Omar Hassan
Waad ku mahadsan tahay tirada sii kordhaysa ee beeraleyda ku dhalatay Afrika ee hadda ka shaqeeya aagagga Portland iyo Lewiston, khudaarta laga yaqaan qaaradda Afrika, sida molokhia iyo amaranth, ayaa diyaar u ah inay ka iibsadaan beerta halkan Maine. Hadda ma jirto baahi loo qabo in laga iibsado Afrika barafaysan.
Ka sokow yaanyada, basbaaska, galleyda, okra, iyo cagaarka qoorta, khudaarta caanka ah ee caanka ah ee loo adeegsado suxuunta Afrika ayaa lagu beeraa beeraha iskaashatada ee ku xiran Beerista Beeraha (Beerta Duufaanta Hurricane), Ururka Beesha Bantu ee Soomaalida (Beeraha Xoraynta), iyo Xididdada Cusub. Beeraha Iskaashatada. Wax-soo-saarka ayaa laga heli karaa suuqyada beeraleyda iyo qaar ka mid ah suuqyada ay leeyihiin muhaajiriintu, iyada oo aan loo baahnayn in meel kale laga dukaameysto. Taageer dhaqaalaha Maine – ka dukaamee maxalliga.
*Amaranth waa mid ay jecel yihiin beeraleydu- waa dalag lagu beeri karo abuurkiisa, oo la kariyo loona cuno sida hadhuudhka, ama cagaarka, kaas oo waa waxa lagu iibiyo New Roots. Amaranth waxaa ka buuxa fiber, bir, iyo nafaqooyin kale, waana macaan! Dadku waxay inta badan kariyaan amaranth la jarjaray qaybo yaryar, oo lagu kariyay saliid saytuun, basal, iyo yaanyo. Ku dar hilibka digaaga ama khudaarta, okra, hilibka- wax kasta oo wanaagsan.
—socda Cumar Xasan/Beerta Iskaashatooyinka Cusub ee Roots Ama
PreviousFaa’iidooyinka iyo qasaaraha qaababka lacag dirista
NextBanaynta dariiqa aaminaadda tallaalada